November 2016 ~ ဒေါက်တာလီးကြီး
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com. Monday, November 28, 2016
House With A Good View3(ကိုရီးယား၁၈+++)
Watch and Download Here with Small File Size 278MB
Nice Sister in Law (ကိုရီးယား ၁၈+++)
Sister in law ထဲက နောက်ထပ်ခပ်မိုကမိုက်ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ ခယ်မလေးနဲ.တအိမ်ထဲမှာအတူတူနေရင်းသံယောဇဉ်ဖြစ်သွားပီးတော. အိမ်ကလ်ူတွေမသိအောင်ခိုးစားတဲ.ဇာတ်လမ်းလေးပါ။
Watch and Download Here with Small File Size 200MB
The Babysitter (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး 7:21 AM
http://adf.ly/1gCWoJ Read More
မင်္ဂလာပွဲလာ ဧည့်ပရိသတ်များကို သတို့သားသတို့သမီးက ချစ်တင်နှောပြပြီး ဧည့်ခံရတဲ့ မင်္ဂလာပွဲ
ကျောင်းသွားရင်းနဲ့ ကားပါကင်မှာ ခဏ၀င်နားနေတဲ့အတွဲ လိုင်းပေါ်ရောက်ပြီး နာမည်ကြီးနေတယ်
မောင်ညကြရင်ကြည့်မလို PCLOUD LINK
ခုံလေးပေါ်မှာမှိန်းလို့ - မြန်မာချောင်းရိုက် အပိုင်း ၂
PCLOUD ONE CLICK Read More
ခုံလေးပေါ်မှာမှိန်းလို့ - မြန်မာချောင်းရိုက် အပိုင်း ၁
ဒီမှာဒေါင်းသွား Read More
သစ်ပင်ကြီး အောက်ကချစ်သူများ ( ၁၄ )
သစ်ပင်ကြီး အောက်ကချစ်သူများ ( ၁၃ )
စော်ကတော့အလန်းလေး ပေါင်တောင်ကားပေးလိုက်သေးတယ် လူမိမှာလည်းကြောက်ကောင်းလည်းကောင်းနေတယ်
သစ်ပင်ကြီး အောက်ကချစ်သူများ ( ၁၂ )
japanမလေးအရမ်းချောတယ် 8:20 AM
မြန်မာ့ပထမဦးးဆုံးး live လွင့်ပီးးလိုးးတဲ့အတွဲ
မင်္ဂလာပွဲလာ ဧည့်ပရိသတ်များကို သတို့သားသတို့သမီးက ချ...
ကျောင်းသွားရင်းနဲ့ ကားပါကင်မှာ ခဏ၀င်နားနေတဲ့အတွဲ လ...
ခုံလေးပေါ်မှာမှိန်းလို့ - မြန်မာချောင်းရိုက် အပိုင်...
စော်ကတော့အလန်းလေး ပေါင်တောင်ကားပေးလိုက်သေးတယ် လူမိ...
အပေါ်စီးကနေခိုးရိုက်ထားတာဘဲက နားရင်း ဆေးလိပ်တောင်ဖွ...
အိမ်တွင်းဖြစ်ရှယ် ၄ တခါထဲကြည့်ရုံပါပဲ အဆင်ပြေပါစေ
အိမ်တွင်းဖြစ်ရှယ် ၃ တခါထဲကြည့်ရုံပါပဲ အဆင်ပြေပါစေ
အိမ်တွင်းဖြစ်ရှယ် ၂ တခါထဲကြည့်ရုံပါပဲ အဆင်ပြေပါစေ
အိမ်တွင်းဖြစ်ရှယ် ၁ တခါထဲကြည့်ရုံပါပဲ အဆင်ပြေပါစေ
ရေချိုးခိုးရိုက် တခါထဲကြည့်ရုံပါပဲ အဆင်ပြေပါစေ
မြန်မာမလေးအရည်တွေ အများကြီး ထွက်နေပြီတဲ့ ဗျာ
ရေချိူးချောင်းရိုက် ( ၈ )
ရေချိူးချောင်းရိုက် ( ၇ )
ရေချိူးချောင်းရိုက် ( ၆ )